NU Display Apk 2022 Download ho an'ny Android [Vaovao]
Aprily 4, 2022 Janoary 18, 2022 by Reyan Ahmad
Te-hahatonga ny Smartphone ho manintona, mamorona ary tsy mitovy amin'ny telefaona hafa ve ianao? Raha eny, dia nitondra fampiharana anao izahay, izay fantatra amin'ny hoe NU Display Apk. Io no rindranasa Android farany, izay manolotra fikirakirana manokana ho an'ny smartphone Display.
Araka ny fantatrao, ny olona amin'izao fotoana izao dia mitsara ny hafa amin'ny endriny sy ny fananany fitaovana. Misy teboka samihafa, izay matetika no hitan'ny olona momba ny hafa, alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra. Noho izany, Smartphone izao dia saika ampahany amin'ny vatana ho an'ny rehetra. Mampiasa telefaona ny olona amin'ny toe-javatra rehetra na toe-javatra rehetra.
Noho izany, ny fitaovanao dia mampiseho ny olona, ​​karazana olona manao ahoana ianao. Noho izany, misy fomba roa lehibe, izay ahafahan'ny olona rehetra manao ny fitaovana Android ho manintona. Ny voalohany dia tsotra, izany hoe tsy maintsy mividy fitaovana Android lafo vidy ianao ary ny olona dia hanana sary tsara momba anao.
Misy olona an-tapitrisany, izay tsy mahazo fitaovana lafo vidy. Ahoana àry ny momba azy ireo? Ho an'ireo olona rehetra ireo, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay ahafahanao manamboatra fitaovana Android ambany indrindra. Te-hahafantatra momba izany rehetra izany? Raha eny, dia mijanòna aminay ary alao ny fampahalalana rehetra.
Topimaso momba ny NU Display Apk
Izy io dia rindranasa Android Personalization, izay manolotra fitambarana fananganana fanaingoana mandroso. Manome toe-javatra isan-karazany izy io, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpampiasa dia afaka manamboatra ny doka rehetra tsy azo atao.
Misy fizarana samihafa, izay manolotra endri-javatra namboarina. Ao amin'ny voalohany dia misy ny toe-javatra ankapobeny, izay manome ny fitambaran'ny fanaraha-maso rehetra amin'ny fampiharana. Amin'ity fizarana ity dia misy fanaraha-maso samihafa azo alaina, izay manomboka amin'ny hery.
Afaka mamela sy manafoana ity fampiharana ity amin'ity mpampiasa ity ny mpampiasa. Raha tadiavinao ny fiasan'ny fitaovanao amin'ny fomba miavaka amin'ny fotoana voafetra dia azonao atao koa ny mametraka fandaharam-potoana. Ny fanaingoana anao dia tsy handeha raha tsy amin'ny fotoana voatondro.
Misy endri-tsoratra sasany azo alaina amin'ny fitaovana sasany, azonao ampiharina. Fa ny NU Display App dia manolotra karazana endritsoratra maherin'ny dimampolo. Azonao atao ny manamarina ny tsirairay amin'izy ireo ary mampihatra ny iray amin'izy ireo amin'ny fanasokajiana anao.
Azonao atao mihitsy aza ny manampy fiasa isan-karazany isaky ny fikapohana ny rantsan-tànanao. Izy io dia manome ny fidirana amin'ireo mpampiasa, izay ahafahan'izy ireo manova sy manampy fiasa samihafa. Afaka manova ny fahatsapan'ny swipe mihitsy aza ny mpampiasa, izay ahafahany mifehy ny hakitroky ny swipe.
Noho izany, manaova swipes fotsiny ary manaova fahatsapana mahagaga. Noho izany, te hanamboatra loko ve ianao? Raha eny, dia ny NU Display Pro Apk dia manolotra fanangonana maro loko isan-karazany, izay azonao isafidianana sy ampiharina amin'ny fampisehoanao. Misy ny sasany amin'ireo fanangonana loko tsara indrindra hitanao.
Ny fampandrenesana pop-up dia matetika amin'ny fomba mahazatra taloha. Noho izany, ovay araka ny tsironao. Manaova fanovana amin'ny lokon'ny kisary, ary tanisao mainty izay fampandrenesana fampiharana tsy ilaina. Manàna fifehezana feno amin'ny fanitsiana ny haben'ny kisary rehetra misy.
Misy endri-javatra mahavariana maro kokoa hita ao amin'ity rindrambaiko ity, azonao zahana. Fa ny tena olana, izay matetika atrehin'ny olona, ​​dia ny fahasahian'ny bateria haingana. Ho an'ity olana ity dia manome vahaolana tonga lafatra izy, izay fantatra amin'ny anarana hoe paosy paosy. Amin'ity safidy ity dia ahafahan'ny fitaovanao hanafoana ny vokany rehetra rehefa eo am-paosinao io.
Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary tadiavo ireo fampiharana rehetra misy. Misy ihany koa ny endri-javatra karama sasany ao amin'ny NU Display Pro, izay azonao idirana mora foana amin'ny fijerena doka dimy min na azonao andoavana. Manana safidy roa ianao hidirana amin'ilay kinova pro.
anarana NU Asehoy
Anaran'ny fonosana com.zubmobile.aod
Fomba fanehoana nasongadina
Manampia Function amin'ny Swipe
Makà loko maro samihafa amin'ny fampisehoana
Tsy ilaina ny fisoratana anarana
Ny fampiasana batterie dia ambany
Ny fampiharana fanaingoana Android mitovy amin'izany ho anao.
Ny fisie Apk an'ity fampiharana ity dia misy eto amin'ity pejy ity, izay midika fa tsy mila mandany ny fotoananao amin'ny tranokala hafa. Noho izany, tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana, izay misy eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Manaova paompy tokana eo aminy ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Tsy mila mividy finday avo lenta lafo vidy ianao raha te hijery manintona, mila mametraka NU Display Apk amin'ny fitaovanao fotsiny ianao. Hahatalanjona ny olona ny momba anao sy ny findainao. Noho izany, sintomy avy eto ambany ary zahao ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Personalization Tags NU Display Apk, NU Display App, NU Display Pro Apk Post Fikarohana
AMPLOP Merah Apk 2022 Download ho an'ny Android [Mahazoa fampindramam-bola]
Teen Patti Crazy Apk 2022 Download Ho an'ny Android